ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ် ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစေ့ထုတ်စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ
ကြီးထွားမှုအမျိုးအစား F1 မျိုးစပ် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် ကြီးမားသော အနီရောင် ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ အရောင်- အနီရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SX ရိုမန်မျိုးစပ်သတ်မှတ်ခြင်း- YES အသီး အလေးချိန်- 180g ဝန်းကျင် အသီးအရောင်- အနီရောင် အသီးပုံသဏ္ဍာန်- Oblong ပုံသဏ္ဍာန် အထွက်နှုန်း- မြင့်မားသော အထွက်နှုန်း ထုပ်ပိုးမှု- အစေ့ ၁၀၀၀/အိတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကြီးထွားမှုအမျိုးအစား F1 မျိုးစပ်မှုကို ဘဲဥပုံပုံသဏ္ဍာန် အနီရောင် ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ 1. မျိုးစပ် F1၊ ကြီးထွားမှု အမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်ပါ။...
Hybrid f1 အဝါရောင် တရုတ် ခရမ်းချဉ်သီး အစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ အရောင်- အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- ဟီဘေး၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ရိတ်သိမ်းမှု No.1 မျိုးစပ်မှု- YES မျိုးစေ့အမျိုးအစား- F1 မျိုးစပ်ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစေ့များ ခံနိုင်ရည်ရှိ...
အသီးအနှံများ ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များကို ပြုပြင်ခြင်း။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ခရမ်းချဉ်သီးစေ့၊ ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ အရောင်- အနီရောင် ပင်ရင်းနေရာ- ဟီဘေး၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXTS No.8187 မျိုးစပ်မှု- YES ရင့်ကျက်မှု- အစောပိုင်းရင့်ကျက်မှု အသီးအရောင်- အနီရောင် အသီး အလေးချိန်: 80-140g အစိုဓာတ်- 8% အပင်ပေါက်ခြင်း- >90% သန့်ရှင်းမှု- 98% သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်-3နှစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO9001;CO;CIQ;ISTA ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် SXTS No.8187 အမျိုးအစားစပ်မျိုး ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့ထုတ်ခြင်း t...